‘ए मेरो हजुर ४’ निर्माण पक्का, सुहानाको जोडी को ? « Intro Nepal
‘ए मेरो हजुर ४’ निर्माण पक्का, सुहानाको जोडी को ?
Published On : ६ कार्तिक २०७६, बुधबार १७:०८
नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई दुई व्यवसायिक सफल फिल्म पस्किसकेकी निर्देशक झरना थापाले ‘ए मेरो हजुर ४’ निर्देशन गर्ने पक्का भएको छ । ए मेरो हजुर सिरिजलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ नाम राखेर फिल्म निर्माण गर्ने दोधारमा रहेकी झरनाले अन्तत ए मेरो हजुर सिरिज नै रोजेकी छिन् ।
उनले सामाजिक संजाल मार्फत आफ्नो तेश्रो निर्देशन रहने फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ निर्माण गर्ने पक्का भएको बताएकी छन् । उनले एक गीतको केही अंश पोस्ट गर्दै फिल्मको तयारि सुरु भएको अनौपचारिक घोषणा गरेकी हुन् ।
झरनाको निर्देशन रहेको पहिलो फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ र दोश्रो निर्देशन ‘ए मेरो हजुर ३’ व्यवसायिक रुपमा सफल सावित भएका थिए । डेब्यु निर्देशनमा नायिका सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र नव-नायक सलिन मान बनियाँसंग काम गरेकी झरनाले दोश्रो फिल्ममा युवा स्टार अनमोल केसीको जोडीको रुपमा आफ्नी छोरी सुहाना थापालाई फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गराएकी थिइन् । उनले तेश्रो फिल्ममा नायिकाको रुपमा सुहाना थापा नै रहने पक्का भए पनि नायक नयाँ राख्ने या चलेका नायक लिने भन्ने विषयमा निचोडमा पुगिनसकेको बताइन् ।
ए मेरो हजुर ३मा अनमोल र सुहानाको जोडीलाई नेपाली फिल्मका दर्शकले निकै रुचाएका थिए । धेरैको अपेक्षा आगामी फिल्ममा यी दुईको जोडी दोहोरिएला भन्ने पनि छ । तर, उनीहरुको टिमअप हुने सम्भावना न्यून रहेको झरना निकट श्रोतको दावी छ । सुनिल कुमार थापाको निर्माण रहने फिल्मलाई आगामी वर्ष ०७७ को दशैँमा प्रदर्शनमा ल्याउने लक्ष्य निर्माण पक्षको रहेको छ ।